Kudar GPS iyo batari saaid ah Waqtigaaga Dhagax dixeed leh suunkaan | Wararka IPhone
Kudar GPS iyo batari dheeri ah Waqtigaaga Dhagax-dhagax leh suunkaan
The smartwatch-ka loo yaqaan 'Pebble smartwatch' wuxuu ka mid ahaa smartwatches-kii ugu horreeyay ee ku soo dhaca suuqa, oo ah suuq wax ka beddelay isla markaana caan ka dhigay aaladda noocan ah ee dadweynaha dhexdeeda. Moodelkii ugu horreeyay ee uu Pebble ka bilaabay suuqa wuxuu na siiyay shaashad khad elektiroonig ah. Sanadihii la soo dhaafay, shirkaddu waxay billowday qaabka Pebble Time, oo ah noocii ugu horreeyay ee shirkadda leh shaashad midab leh, oo sidoo kale leh 16 midab, laakiin waxay ahayd mid aad u liidata isbeddellada wixii aan horay uga heli jirnay suuqa, halkaasoo smartwatches ay noqdeen caan ah oo aan ka heli karno moodooyin leh shaashadaha LCD. Khasaaraha kaliya ee moodelladan cusub ayaa dabcan ahaa nolosha batteriga, In kasta oo shaashadaha khad elektarooniga ah ay na siinayaan ismaamul qiyaastii ah 7 maalmood, aaladaha leh shaashadaha LCD badanaa kama badna muddada maalin.
Markii la bilaabay 'Pebble Time' waxaan arki karnay sida smartwatch uu u lahaa xiriir u oggolaanaya in la ballaariyo awoodaha qalabka adoo ku daraya xargaha. Kooxda loo yaqaan 'Pal Strap band' waa suunka raadinaya maalgalinta 'kickstarter' iyo tan Waxay sidoo kale na siinaysaa batari isku dhafan oo dheeri ah iyo qalab GPS ah si loo ballaariyo awooda qalabka. Qalabkani wuxuu ku habboon yahay dhammaan kuwa isticmaala aaladda si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqyadooda isboorti oo ay rabaan inay ogaadaan marwalba marinka ay sameeyeen.
Suunkaan kaliya la jaan qaadi kara moodooyinka loo yaqaan 'Pebble Time and Pebble Time Steel'. Gudaha gudahiisa waxaan ka heli karnaa qalab GPS ah oo noo ogolaanaya inaan la soconno wadadeena, xisaabino masaafada aan soo marnay iyo sidoo kale xawaaraha iyo dhererka wadadeena. Apple Watch sidoo kale waxay leedahay deked ku taal aaggii loo adeegsaday in lagu xiro fiilooyinka aaladda, deked ay Apple isticmaali karto si ay u balaadhiso awooda aaladda iyadoon loo baahnayn inay bedesho qaabka.
Apple wuxuu ku bilaabi karaa xarigyo dareemayaal cusub taas waxay noo oggolaan lahaayeen inaan cabirno oksijiinta dhiigga, wareegga neefsashada, cadaadiska dhiigga iyo heerkulka jidhka. Laakiin intaa waxaa sii dheer waxay sidoo kale ku dari kartaa qalab GPS ah oo dadka isticmaala ay u isticmaali karaan inay ku daraan hawsha GPS si ay u dalbadaan dhammaan dadka isticmaala.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Kudar GPS iyo batari dheeri ah Waqtigaaga Dhagax-dhagax leh suunkaan
Apple wuxuu ka laabtay macruufka 9.3.2 sababtoo ah dhibaatada iPad Pro 9.7 "